Sidee Kansiisadaha Qeyb Uga Yihiin Dagaalka Itoobiya? | Xaqiiqonews
Sidee Kansiisadaha Qeyb Uga Yihiin Dagaalka Itoobiya?
Magaalada Bahirdar ee caasimadda u ah Amxaarada iyo caasimadda Adis Ababa ayaa looga dabaal dagay guul sida la sheegay ciidanka Itoobiya ay ka soo hoyeen dagaalka ay kula jiraan TPLF, ka gadaal markii shalay ciidanka gudaha u galeen magaalada Mekelle
Warbaahinta Itoobiya ayaa baahisay sawirka kaniisad kooxda TPLF hubka ay ku keydsan jireen, kaniisaddaasi ayaa ku burburtay dagaalka markii ciidanka xoreynta shacabka Tigrey “TPLF” ay u adeegsadeen dhufeys ahaan.
Shacabka Deegeenka ayaa dalbanaya in hubka meesha laga helay oo aad u badnaa dib loogu dayactiro kansiisadda.
Sidoo Kale Aqri: Su’aal iyo Jawaab Dagaalka Sokeeye Ee Itoobiya Ka Bilowday
Xilli warbaahinta Itoobiya ay baahineyso guulo ay ka gaareen aagga dagaalka iyo in ay ku daba joogaan hogaamiyaasha TPLF, dhanka kale wararka ayaa sheegay in sarkaal ka tirsanaa ciidanka Itoobiya uu ka goostay ciidanka.
Col.Salaki Abay ayaa lagu soo warammayaa in uu la baxsaday boqolaal askar ah, tilyahan ayaa ka mid ah saraakiisha hogaamineysa aagga dagaalka Tigray.
Dagaalka Tigray ayaa u muuqda mid u sii xuub siibaneysa dagaal jabhadeyn oo daba dheeraada, ciidanka Tigray ayaana magaalada iskaga baxay.